Thutshu nge penti umculi !!! Qede ebeke abamphaphelayo endaweni yabo. -
U Gettie Sibanda odume ngelika Gettie Diamond ongumculi we Kwasa kwasa uthutshe nge penti enkundleni zokuxhumana. Ngemva kokubona lesi isithombe abadala bazame ukuncoma ngendlela angayithandiyo wahle wababeka endaweni yabo.
I posta ka Gettie Diamond esebeka abamphaphelayo endaweni yabo.
Gettie Diamond:Okay asizwananeni lana kulabo abasebethanda ukuba ngo parent of e yr kimi, this is my account my fb, my wall so i post wat i want so nina eniza lana n want to b my parent lana kufb imani kancane nezwa f into engiyibhalile kufb or post ungayithandi phuma kuyo or unfriiend m or jst go n hang yoself, imthetho nokubasrs go n do it kumafamily meetings wekini sezwana mxxm
i Comment yomunye wabazali.
Zwide Mihha Ndlovu: Umuntu asuke e Goli aye ethekwini afike ajabulele ukubona amanzi amanengi, after that ayobona abantu abanengi bejabulele ukubuka amadoda angu 11 gwiqiqi sesithethisa thina abazali of the year, #LoveAndPeaceNana
U Gettie waduma emphakathini ebuncanini bakhe ngoba kwaba nguye umculi wakuqala we Kwasa kwasa ukucula eleminyaka eyi 15. Okwenza abantu abanengi bemthande njalo befise lokuzwa ingoma zomntwanyana osakhulayo